जनप्रतिनिधि चुन्न मतदान सुरू, के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन ? « Salleri Khabar
जनप्रतिनिधि चुन्न मतदान सुरू, के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन ?
३० वैशाख, काठमाडाैँ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज बिहान ७ बजेदेखि उत्साहपूर्ण रुपमा मतदान सुरु भइसकेको छ । यो क्रम साँझ ५ बजेसम्मै चल्नेछ ।
मतदानलाई स्वतन्त्र, भयरहित, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन सबै पक्षमा आह्वान गरिएको छ । निर्धक्क भएर मतदानमा सहभागी हुन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मतदातालाई आग्रह गरे ।
आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बालिग मताधिकारको आधारमा संविधानले सबै नेपाली जनतालाई निर्वाचनमा सहभागी हुने अधिकार दिएको बताए ।